Hyginus Umeje: Kwụsinụ ịba ụgbọala n'adịghị mma! - BBC News Ìgbò
Hyginus Umeje: Kwụsinụ ịba ụgbọala n'adịghị mma!
7 Febrụwarị 2018
Image copyright Hyginus Omeje
Nkenke aha onyonyo Otu n'ime ụgbọala ndị ahụ kụkọtara isi ọnụ ụnyaahụ n'okporoụzọ Lagos-Ibadan
Onyeisi ụlọọrụ n'ahụ maka ihe gbasara njem okporoụzọ na Lagos steetị akpọrọ Hyginus Omeje, adọọla ndị na-eme njem okporoụzọ aka na ntị ka ha ghara ịba ụgbọala na-ezuchaghị oke ọzọ maka ịdabanye ihe mberede okporoụzọ.
O kwuru nke a maka ihe mberede okporoụzọ mere ebe ụgbọala bu mmanụ agbịdị na nke bu nkpọ (container) ndị mmadụ nọ n'ime ya sukọtara ọnụ ma nwuru ọkụ. Ọ sị na mgbe ọkụ ahụ na-agba onweghị onye ma na mmadụ nọ n'ime ya bụ nkpọ.
Nkenke aha onyonyo Amataghị n'oge na mmadụ nọ n'ime ụgbọala a mgbe ọkụ bidoro gbawa
A kara igbochịnwụ ya bụ ihe mberede?
Hyginus kwuru na ụzọ ihe ndị a bụ ihe a ga-eme iji hụ na-egbochiri udịrị ọkụọgbụgba ugbọala mmanụ agbịdị ndị a na-ebute:
Ndị ọkwọ ụgbọala kwụsị ịgba oke ọsọ n'okporoụzọ
Ndị ọkwọ ụgbọala kwụsị iṅụ mmanya tupu ha agbawa n'okporoụzọ
Ndị ebu n'ụgbọala dọọ ndị ọkwọ ụgbọ na-agbasi ọsọ ike n'okporoụzọ aka na ntị
Ọkwọ ụgbọala ọbụla kwesịrị inwe ihe na-ebelata oke ọsọ n'ụgbọala ya
Okwukwara na ọbụrụ na gọọmentị etiti ruzie ụgbọoloko ndị dị na Naijirịa, ọ ga-abụ ụzọ ọzọ ka mma eji ebupu mmanụ agbịdị.
O kwukwara na onweghị mgbe gọọmenti Lagos jiri kwụsị ụgbọala na-ebu mmanụ agbịdị ịgba n'ehihie kama ọ bụ nanị ụgbọ ndị na-ebu ibu ndị ọzọ.
N'otu aka ahụ, onyeọrụ nchekwa njem okporoụzọ n'obodo Iba dị na Legọs akpọrọ Adeyemi Obagbemiro kwuru sị na onye ọkwọ ugbọala bu mmanụ agbịdị ọbụla kwesịrị iburu ụzọ ga-mụọ etu-esi ebu ibu dị arụ ma dịkwa mmiri.
Ọ sị na ya bụ ọkụọgbụgba mere ụnyaahụ agaghị eme maọbụrụ na ihe eji emenyụ ọkụ abụọ kg itoolu (9kg) dị n'ime ụgbọala abụọ ahụ kụkọtara isi ọnụ. N'agbanyeghị ihe ndị a niile, ọ si na ndị FRSC na ndị otu ndị ọzọ n'ahụ maka nchekwa okporoụzụ na Naijirịa n'abiakọta ọnụ iji hụ na ihe mberede okporoụzọ belatara.